Malezia: Hatezerana tamin’ny bilaogera iray mpanavakava-bolonkoditra · Global Voices teny Malagasy
Malezia: Hatezerana tamin'ny bilaogera iray mpanavakava-bolonkoditra
Voadika ny 16 Marsa 2019 3:18 GMT
Voalaza nandefa fihetseham-po tsy tia Indiana tao amin'ny bilaoginy, Life is a Drama ilay bilaogera antsoina hoe “Sammy”, mpiasa iray 22 taona tao amin'ny orinasan-tserasera iray tao Kuala Lumpur. Nandefa ny fanehoan-keviny ity bilaogera ity taorian'ny filazany fa nangalarin'ireo tanora roa lazaina fa Indiana ny findainy raha nisakafo izy ny 23 septambra.
Niantso ny polisy noho izany ny Hindu Rights Action Force (Hindraf) mba handray andraikitra manoloana ity bilaogera ity noho ny fanehoan-keviny manavakava-bolonkoditra. Nanao tatitra tany amin'ny polisy tao Butterworth momba ny fanehoan-kevitra nataon'ilay bilaogera ny mpandrindra ny Hindraf ao Penang, MN Anbalgan, sy ny lehiben'ny fampahalalam-baovao, S Vadi Velan. Notaterina fa toy izao no tenin'i Anbalgan :
Tsy fiteny, tsy azo ekena ary tsy mendrika ny tena Maleziana ny fanamarihana manavakava-bolonkoditra nataon'i Sammy … Manevateva ny Indiana, mahamenatra ny vondrom-piarahamoniny manokana ary maneho taratra amin'ny endrika ratsy ny mifanohitra amin'ny vondrom-piarahamonina Maleziana ny fanehoan-kevitra navoakany .
Nanala ilay fanehoan-kevitra navoakany manavakava-bolonkoditra noho izany ilay bilaogera Sammy, ary nanoratra izay toa fialan-tsiny tao amin'ny bilaoginy :
Eny eny fa manavakavaka aho fa tsy amin'ny fotoana rehetra. Tsy milaza izany akory fa Indiana ny ankamaroan'ny mpangalatra finday izay reko. Na Malay na Indon …
… Miala tsiny raha nahatezitra ireo Indiana aho. Tokony ho fantatrao fa raha anisan'ilay tsara sy mahay ianao dia tsy tokony hanahiran-tsaina anao izay zavatra nolazaiko .
Nahavita nahazo ny dika mitovy tamin'ny fanehoan-kevitra nalefany voalohany ny Malaysiakini, vavahadim-baovao an-tserasera malaza ao Malezia, izay voalaza fa nahitana fanehoan-kevitra toy izao :
Halako ny Indiana. Tena ratsy fa malaza ho mamo sy mafiloha (ny ankamaroan'izy ireo mihitsy). Malaza ho mpangalatra, mpanendaka, mpanolana, tsy misy saina, maivandoha, mamolava sy ny lisitra lava be ankehitriny izy ireo…
Tsy mikasa ny hanavakava-bolonkoditra aho fa ny Indianina foana no manao izany. Fahadisoan'ny Indiana izany. Tsy miraharaha aho na ho toriana noho ny fanavakavaham-bolonkoditra aza .
Niseho tamin'ny lohatenim-baovao tamin'ity taona ity ny tatitra nivoaka momba ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny fanehoan-kevitra saropady mahakasika ny fivavahana, ary niteraka fiantraikany miovaova arakaraka ny toe-javatra niseho. Voalaza fa nanao fanamarihana manavakava-bolonkoditra nandritra ny fanomanana ny fifidianana farany ilay mpanao politika, Datuk Ahmad Ismail. Naato tao amin'ny antoko politikany nandritra ny telo taona izy, raha ilay mpanao gazety nitatitra ny teniny kosa, Tan Hoon Cheng, dia nogadraina tsy nisy fitsarana araka ny Lalànan'ny Filaminana Anatiny (ISA) nandritra ny 18 ora. Nomena taratasy fangatahana fanazavana ilay gazety izay nanaovan'i Tan tatitra, Sin Chew Daily. Etsy andaniny, voalaza fa notanana araka ny Lananan'ny (ISA) satria naneso ny Islamo tao amin'ny lahatsorany i Raja Petra Kamarudding (RPK).
Tranganà fanavakavaham-bolonkoditra mivantana ny sasany tamin'ireo tranga ireo – toa ny an'i Sammy izay niaiky ny tenany fa izy dia mpanavakava-bolonkoditra indraindray raha nampiasain'ny manampahefana mba hamerana ny feon'ny mpanohitra kosa ny tranga hafa. Nahatonga ny governemanta handany ny Lalàna momba ny Fifandraisana Ara-poko ny olan'ny fifandonana noho ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny hatezerana noho ny fisian'ny fanavakavaham-bolonkoditra.
Ny polisy tao Butterworth no hoe nilaza fa ny foibe nasionaly Bukit Aman no hanadihady io tranga io, satria tao an-drenivohitra no nivoaka ity lahatsoratra ity. Tsy fantatra mazava ny mety ho fiampangana hanamelohana an'i Sammy, raha misy, na dia hita aza fa maneho ny fironana fanasaraham-bazana araka ny lalàna Maleziana ny fanehoan-kevitra nataony.
[Vaovao farany: niala tsiny tsy nisy fepetra tao amin'ny bilaoginy i Sammy tamin'ny fotoana namoahana voalohany ity lahatsoratra ity. Voalaza fa nanaiky ny fialantsininy i Hindraf. Tsy misy filazana raha mbola hitohy ny fanadihadiana na tsia].
Fahalalahàna miteny 06 Mey 2022